Ukwabelana ngeLAN, ukuhambisa iifayile kwiPC ukuya kwiPC kwinethiwekhi yakho yendawo | Ubunlog
Ukwabelana ngeLAN, ukuhambisa iifayile kwiPC ukuya kwiPC kwinethiwekhi yakho yendawo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-LAN Share. Yi Isicelo esilula sokwabelana ngeefayile ukusuka kwiPC ukuya kwiPC. Esi sisixhobo sasimahla, esivulekileyo kunye nesixhobo esiza kwenza ukuba sikwazi ukuthumela iifayile ngokukhawuleza phakathi kweekhompyuter ezisebenzisa iiWindows kunye / okanye Ubuntu kunye nolwabiwo olususelweyo
Ukuhanjiswa kwefayile kwenziwa ngokuthe ngqo, iPC kwiPC. Oku kuyakwenzeka kunethiwekhi yethu yendawo okanye kwi-Wi-Fi. Akukho luqwalaselo lufunekayo inzima kwaye ingacingi nokucinga kancinci malunga neemvume zomsebenzisi. Isabelo seLAN ngumxhasi wokudlulisa iifayile zenethiwekhi ebhalwe kwi-C ++ kunye ne-Qt yomdibaniso womzobo.
Singayisebenzisa inkqubo ukwenza thumela ifayile okanye ifolda ukusuka kwenye ikhomputha ukuya kwenye sebenzisa isicelo. Isicelo sisebenza kwiWindows nakwiBuntu. Oku kuthetha ukuba singayisebenzisa ukudlulisa iifayile ukusuka IWindows kwi-Ubuntu, de Ubuntu kwiWindows, de IWindows kwiWindows kwaye ngokucacileyo sinokuyenza Ubuntu kwi-Ubuntu.
Xa usebenzisa le nkqubo, asizukufumana iiseva zomntu wesithathu, okanye iinkonzo zelifu, okanye iifolda eziphakathi, okanye iinkqubo ezinzima zomgaqo-nkqubo obandakanyekayo kudluliso lolwazi. Kufuneka nje faka usetyenziso kwikhompyuter nganye esifuna ukuyisebenzisa, Sebenzisa imenyu ethi 'Thumela' ukukhetha iifayile / iifolda okanye iifolda / ekufuneka sizithumele kwaye ukhethe isixhobo esikuso.
Inye into ebalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni, eyiyo eyona mfuneko ibalulekileyo, kukuba iikhompyuter ezichaphazelekayo zikwinkqubo yenethiwekhi efanayo okanye Uxhumo lwe-Wi-Fi.
1 I-LAN yabelana ngeMpawu ngokubanzi
2 Khuphela isabelo seLAN
3 Khupha ngaphandle
I-LAN yabelana ngeMpawu ngokubanzi
Isebenza kwangoko, iPC kwiPC. Akukho manqaku aphakathi.
Ingaphezulu khawuleza ukuba sisebenzise inkonzo yelifu njengeDropbox.
Iya kusivumela thumela iifayile okanye iifolda, ngaphandle kwesidingo sokucinezelwa, phakathi kweenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza.
Hayi Unobungakanani bemida kwiifayile ezithunyelweyo.
Ujongano lomsebenzisi olunikezelayo lulula kakhulu kwaye luthe tye.
Iwindow ephambili yenkqubo yahlulwe ngesiqingatha. Kwindawo ephezulu siya kufumana iifayile ezithunyelweyo kunye neefayile ezifunyenweyo esizakuzifumana kwicandelo elisezantsi. Omabini la maqela aya kusibonisa inkqubela phambili yexesha kunye nemethadatha xa iifayile zithunyelwa kunye / okanye zifunyenwe.
El Iqhosha leseto inikezela ukufikelela kukhetho lokukhetha:
Misela okanye utshintshe igama lesixhobo.
Siza kuba nakho ukuseka okanye ukutshintsha amazibuko.
Bonisa ubungakanani besixhobo sokugcina ifayile.
Khetha ifolda yokukhuphela.
Khuphela isabelo seLAN
Los abafaki beWindows kunye noBuntu Zifumaneka kwiphepha leprojekthi leGithub. Kuya kufuneka siye kwelo phepha kuphela kwaye silande ukukhuphela Inguqulelo yamva nje yephakheji .deb.
Nje ukuba ukhuphelo lwepakethe lugqityiwe, sinokusebenzisa ifayile ye Ubuntu isoftware eluncedo yofakelo. Ukuba ngabahlobo abangakumbi kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T), sivula enye kwaye sibhale kuyo
Ukuba sikhetha ukungafaki nantoni na, sinokusebenzisa Ifayile yeAppImage. Singayifumana kwi- Iphepha leGitHub yeprojekthi.
Ukuphelisa le nkqubo kwinkqubo yethu kulula kakhulu. Sivula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sibhale kuyo:
Ukugqiba, ndinokuthi kuphela ukuba into oyifunayo sisixhobo esinoseto oluphambili, ngakumbi ngokubhekisele kwezokhuseleko, esi ayisosicelo sakho. Kukho ezinye, iindlela ezifanelekileyo ngakumbi zokuhambisa iifayile. Esi sicelo asinanto yakwenza ne-SAMBA okanye ukudluliselwa nge-SSH. Kule nqaku sithetha ngento elula kakhulu kunayo yonke loo nto. Kwelinye icala, ukuba le nto uyikhangelayo yinto engaphaya kokuhamba hamba endlwini, ukuba uza kuyisebenzisa dlulisa iifayile phakathi kweekhompyuter ekhayeni lakho, sisixhobo esinconyelwe kakhulu.
Alithandabuzeki elokuba ukuba ufuna ukuhambisa iifayile phakathi kweekhompyuter ngokukhawuleza nangokulula, le yenye yezona ndlela zibalaseleyo, ngokulula njengamandla ayo amakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ukwabelana ngeLAN, ukuhambisa iifayile kwiPC ukuya kwiPC kwinethiwekhi yakho yendawo
UMARIO ALEJANDRO ANAYA sitsho
Khuphela lo myalelo njengoko ubhaliwe kwinqaku kwaye uphosa impazamo "yefayile ayinakwenziwa okanye umkhombandlela awukho. Ndilusizi kuba andinalwazi lokuba ndingayifaka njani inkqubo esuka kwi-.deb ... ndimtsha kwi-linux kangangeentsuku ezili-15, imiyalelo ye-linux kwisiphelo yeyamaTshayina am asisiseko kwaye le log iluncedo kakhulu njengoko ndifunda imiyalelo njengoko ndiyisebenzisa.
Ndafaka i-linux kwilaptop yam ngaphandle kwesidingo ukusukela Windows 10 ndigqibe kwelokuba ndithathe iholide enyanzelekileyo kwilaptop yam andazi ukuba kutheni ndilapha ..
UMario waseRosario, eArgentina
Phendula UMARIO ALEJANDRO ANAYA
Khuphela ifayile ye .deb kwikhonkco abakubeka kuyo kwaye ucofe kabini (ukuba usebenzisa ubuntu okanye ezinye izinto) kufuneka ube nakho ukuyifaka ngokungathi ziifayile ze-windows .exe.
Enkosi kakhulu ngokuphendula.
Ndiyenzile ukusuka kwisiphelo izolo kwaye khange isebenze, andazi sizathu, into ekumele ukuba ndiyenzile ngokungalunganga ... kunjalo
Ndiyenzile njengoko ubonisile kwi-.deb, ngokucofa kabini kwaye iyasebenza, emva kokukhuphela iphakheji kwiwebhu
Iya kuba luncedo kakhulu kum kwixa elizayo ekuxhumeni oomatshini ekhaya.
Molo: Ndiyifakile kwii-PC ezimbini, enye ine-linux mint kwaye enye ine-kde neon, zombini kwi
Inethiwekhi efanayo ne-wifi, i-linux mint ifumanisa i-neon, kodwa i-neon ayifumani mint kwaye andazi ukuba ndiyisombulule njani nge-samba, zombini ii-pc's
Molo! Emva kokufaka iinguqulelo zeewindows, kwiwindows 10, indixelela ukuba iilayibrari ezimbini zilahlekile, iMSVCR120.dll kunye neMSVCP120.dll
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba zithini ezi thala leencwadi, kwaye zifumaneka phi?
URobert Castillo sitsho
Kuya kufuneka ukhuphele i-Visual C ++ yeVisual Studio 2013 ngokwenguqulo yakho yeewindows.
Phendula kuRobert Castillo
ULuis Hoyos sitsho
Eyona ndlela ifanelekileyo yokuhambisa iifayile phakathi kweewindows 10 kunye ne-ubuntu 20.04, kulula kakhulu ukuzifaka kwaye ugqithiso lukhawuleza. Enkosi kakhulu ngolwazi
Phendula uLuis Hoyos
Ndiyabona ukuba yeyama-64 kuphela
UDamien A. sitsho
Phendula kuDamián A.
Uxinzelelo lwe-XZ, isixhobo esilahlekileyo sokucinezelwa kwedatha
Iridium, isikhangeli esisekwe kwiChromium esinobumfihlo engqondweni